S-Ergo-115 अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर-Karman हेल्थकेयर Ergonomic
S-ERGO-115 अल्ट्रा लाइटवेट व्हीलचेयर हाम्रो सुविधाहरु एस आकार आसन प्रणाली
यो धेरै कारणहरु को लागी हाम्रो नम्बर एक सर्वश्रेष्ठ बिक्रेता हो। न केवल यो 25 पाउण्ड मा मापन एक अल्ट्रालाइट व्हीलचेयर हो, यो पनि ergonomics मा सबै भन्दा राम्रो छ। दबाब नक्शा र तौल वितरण हाम्रो विश्वव्यापी पेटेंट S- आकार सिटिंग प्रणाली मा पाईयो एक नजर लिनुहोस्। यो अलग गर्न सकिने footrest र जस्तै उपचार द्वारा हटाउन सकिने कुशन जस्तै धेरै अन्य सुविधाहरु संग आउँछ AEIGIS® उपचार गरियो विरोधी माइक्रोबियल लेपित बस्ने प्रणाली.
अधिक जान्न को लागी लि on्क मा क्लिक गर्नुहोस् वा एक भिडियो हेर्न को लागी कती सजीलो यो यो व्हीलचेयर तह गर्न को लागी, यो ढुवानी, र आउँदो बर्षहरु को लागी यसको आनन्द लिनुहोस्। हामी पनि एक छ यातायात संस्करण S-115TP। यसबाहेक, सबै S-100 श्रृंखला जो अन्य सुविधाहरु र प्रकार्यहरु उपलब्ध छन् तपाइँको विशिष्ट आवश्यकताहरु को अनुरूप को बारे मा जान्नुहोस्। हाम्रो विकल्प मा विचार गर्न नबिर्सनुहोस् छिटो रिलीज पाels्ग्रा.
यो छिटो पठाइएको छ र हाम्रो गोदाम बाट सीधा चाहनुहुन्छ? समस्या छैन। तपाइँ अनुकूलित गर्न को लागी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र तल ड्रप मेनू बाट एक विस्तृत चयन को विकल्प। यदि तपाइँ que मा तपाइँको अर्डर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँ यसलाई मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाँडै हाम्रो गोदाम बाट बाहिर जहाज गर्न को लागी सक्षम छौं सबै आदेशहरु को लागी ३ बजे प्रशान्त मानक समय भन्दा पहिले राखिएको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो ग्राहकहरु लाई सबै भन्दा राम्रो अनुभव सम्भव र खरीद को अनुभव संग प्रदान गर्न को लागी। तपाइँको सही व्हीलचेयर आफैलाई वा मायालु एक हाम्रो प्राथमिकता सूची को धेरै मा छ। यो सेतो मा चाहनुहुन्छ? जाँच गर्नुहोस् S-ERGO सेतो.
यो S-ERGO-115 अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर एक शानदार डिजाइन हो।
यो मूल्यवान छ तर राम्रो संग यसको लायक छ, र याद गर्न को लागी! दिमागमा लामो अवधिको गतिशीलता मुद्दाहरु संग मान्छे को लागी सिफारिश। यदि तपाइँ एक व्हीलचेयर को लागी एक छोटो अवधिको आवश्यकता छ, केहि अन्य मोडेल शायद एक राम्रो समग्र "फिट" यो एक को गुणवत्ता को बावजूद हुनेछ। के तपाइँ एक लामो अवधिको गतिशीलता मुद्दा छ? यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ, तब यो परिवर्तन के तपाइँ एक व्हीलचेयर मा खोज्दै हुनुहुन्छ। आखिर, यदि तपाइँको आवश्यकताहरु छोटो अवधिको हो, धेरैजसो कुनै पनि सभ्य कुर्सी काम गर्नेछ। जे होस्, यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ महिनाहरु र बर्षहरु को लागी एक गतिशीलता सहायता को आवश्यकता को लागी जाँदै हुनुहुन्छ, तब तपाइँ धेरै अधिक विशेष गरी रहीरहनु भएको छ र तपाइँ एक व्हीलचेयर मा के चाहानुहुन्छ को बारे मा कडा प्रश्न सोध्न सुरु गर्नुहोस्।
हामी बुझ्छौं, यही कारण हो कि यदि माथिको वर्णन छ, हामीलाई लाग्छ कि तपाइँ S-115 Ergonomic व्हीलचेयर को हाम्रो गहन समीक्षा लाई माया गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
त्यहाँ बजार मा व्हीलचेयर को एक धेरै छन्। छनौट को एक लगभग भारी संख्या हो कि विश्लेषण पक्षाघात को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। तपाइँ अव्यवस्था को माध्यम बाट काट्न मद्दत गर्न को लागी, हामी यहाँ छौं ताकि तपाइँ एक सूचित खरीद निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ।
कुनै पनि उपाय द्वारा, S-Ergo-115 एक असाधारण मोडेल हो। वास्तव मा, यो हाम्रो बेच्ने सबैभन्दा राम्रो व्हीलचेयर को आजको राउन्डअप समीक्षा मा शीर्ष सम्मान जित्यो। पछिका खण्डहरुमा, हामी तपाइँलाई यो शानदार कुर्सीले गर्न सक्ने सबै कुरा को माध्यम बाट हिड्नेछौं, र तपाइँ यसको (धेरै थोरै) सीमाहरु को बारे मा थाहा दिनुहोस् तेसैले तपाइँ आफैं को लागी निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ यदि यो तपाइँको लागी "सही" मोडेल हो।
कुनै पनि लाल चाँदी
सुन्तला मात्र १″ ″ र १″ ″ सीट आकार को लागी उपलब्ध छ
कुनै पनि फिक्स्ड - मानक छिटो रिलीज पाels्ग्रा (+$ 60.00)
कुनै पनि 24 ″ x1 ″ फ्लैट मुक्त Polyurethane पाels्ग्रा w/ Ergonomic Handrim (मानक) 24 ″ x1 ″ MAG 8 स्पोक पा Whe्ग्रा (फिक्स्ड एक्सल संग मात्र) (+$ १२२.००)
S-ERGO 115-25 पाउण्ड मात्रा
SKU: एस ERGO115 विभाग: Ergonomic व्हीलचेयर, कर्मा व्हीलचेयर, हल्का व्हीलचेयर, अल्ट्रा लाइटवेट व्हीलचेयर टैग: 115, एरगो, यसैले 115, हल्का व्हीलचेयर, s-ergo, s-ergo 115, सर्गो, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर
तौल मात्र 25 पाउण्ड (footrest बिना) अल्ट्रालाइट व्हीलचेयर
निश्चित Armrest w/ Ergonomic Armpads
एन्टि बैक्टीरियल AEIGIS® सीट र पछाडि कुशन
7 ″ × 1 ″ Polyurethane फ्रन्ट Casters
२४ ″ x १ ३/24 ″ Polyurethane फ्लैट मुक्त रियर पाels्ग्रा w/Ergonomic Handrim
फ्रेम रंग: गुलाब रातो वा मोती रजत
सीट चौडाई: 16 "x 17", 18 "x 17", 20 "x 17"
वजन क्षमता: २ l० एलबीएस
Riggings बिना वजन 25 lbs।
S-ERGO-115-अल्ट्रा हल्का व्हीलचेयर UPC#
*जब बिलिंग, हाम्रो अल्ट्रालाइट मा वर्तमान नवीनतम PDAC दिशानिर्देशहरु संग प्रमाणित गर्नुहोस् व्हीलचेयर। यो जानकारी को इरादा छैन, न त यो बिलि or वा कानूनी सल्लाह मा विचार गर्नु पर्छ। प्रदायकहरु उपयुक्त बिलि codes कोड निर्धारण गर्न को लागी जिम्मेवार छन् जब मेडिकेयर कार्यक्रम मा दावी पेश गरीरहेछन् र एक वकील वा अन्य सल्लाहकारहरु लाई थप विस्तृत मा विशिष्ट परिस्थितिहरुमा छलफल गर्न को लागी सल्लाह लिनु पर्छ।
33 × 13 × 31 मा